SPARTA ဘယျကိုသှားနတောလဲဆိုတာကိုလလေ့ာပါ၊ ကြှနျတျောတို့လမျးကွောငျးမွပေုံကိုကွညျ့ပါ။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စနစ်(OSes) များအားလုံးအတွက်compiled nodeတစ်ခုဖန်တီးခြင်း-
ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ဘလော့ခ်ချိတ်ဆက်မှု စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းတို့ကို ဘာသာပေါင်း 20 မျိုးသို့ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း။
အသုံးပွုသူလှယျကူစသေော forging ဆော့ဝဲလျကို ရိုးရှငျးသော ဝပျဆိုဒျပုံစံဖွငျ့ဖနျတီးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင် ဟာ့ဒ်ဝဲလ် ပိုက်ဆံအိတ် ဖန်တီးခြင်းသို့မဟုတ် ရှိနှင့်ပြီးသား ဟာ့ဒ်ဝဲပိုက်ဆံအိတ်များအတွက် ပံ့ပိုးပေးခြင်း။
nLocktime လုပ်ဆောင်ချက်များ။ ၎င်းတို့ကို သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလတစ်ခု၏ နောက်ပိုင်းတွင်သာ ကွန်ရက်ကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်ပါမည်။ ယင်းသည်ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု မဟုတ်သော လဲလှယ်မှုများအတွက်အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။
များစွာသောလက်မှတ်များသည် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပိုက်ဆံအိတ်မှ ဒေတာများကိုခိုးယူရန် ကြိုးစားသောလူလိမ်များလက်မှ ကာကွယ်နိုင်မည့် ထပ်တိုး အကာအကွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွန်ရက်သုံးစွဲသူ တစ်ဦးသည် အခြားယုံကြည်ရသော ကွန်ရက်သုံးစွဲသူ တစ်ဦးအား ခွဲခြားသိရှိနိုင်ပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကို သုံးစွဲသူ၏ လိပ်စာမှ ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပြီးသူသို့မဟုတ် သူမ၏ သည် လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအတည်ပြုရန် သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ရန်သူသို့မဟုတ် သူမ၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် တောင်းခံချက်တစ်ခုကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရလျှင် လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ ၎င်းတို့၏ ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲအတည်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။ သင့် ပိုက်ဆံအိတ်အား လက်မှတ်များစွာ လိုအပ်မှု ရှိမရှိကို သင်ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ပိုက်ဆံအိတ် တစ်အိတ် BIP-31/BIP-44 အတွက် လိပ်စာပေါင်းများစွာကို အသုံးပြုခြင်း။
အမြဲပြောင်းလဲနေသော ဘလော့ခ်အရွယ်အစားသည် hard fork မလိုအပ်ဘဲ ကွန်ရက်အရွယ်အစားနှင့် အခြေအနေကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း။
ဘလော့ခ်အဆက်ဆက် အကြိမ်ရေကို ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် လိုအပ်ပါက hard fork မလိုအပ်ဘဲ ကွန်ရက် အတိုင်းအတာကို ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း။
ဘလော့ခ်တွင် လုပ်ဆောင်ချက်အရေအတွက်ကို အမြဲပြောင်းလဲနိုင်သောကြောင့် လိုအပ်ပါက hard fork မလိုအပ်ဘဲ ကွန်ရက် အတိုင်းအတာကို ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း။
ဒေသခံ ငွေလဲကောင်တာများ/ လျှို့ဝှက်ငွေကြေး လဲလှယ်ရေးရုံးခန်းများ၊ လျှို့ဝှက်ငွေကြေးကို ဟောပြောပွဲများ၊ တင်ဆက်မှုများဖြင့် လူသိများအောင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်များ ရရှိစေခြင်း။
လျှို့ဝှက်ငွေသုံး အေတီအမ်စက်များ ပြုလုပ်လည်ပတ်နိုင်ခြင်း။
အလိုအလျောက် ပြင်ဆင်နိုင်သည့်စနစ်ပါဝင်သည့် မီနီကွန်ပျူတာကို ပင်မချိတ်ဆက်မှုအဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ လျှို့ဝှက်ငွေသုံး အေတီအမ်စက်များမှ နိုင်ငံသုံးငွေများကို အပ်နှံခြင်းနှင့် ထုတ်ယူခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်မည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင် လျှို့ဝှက်ငွေကြေး ပိုက်ဆံအိတ်များ။
ဗီဇာ/မာစတာကတ်များအတွက် ပံ့ပိုးပေးခြင်း။ ကတ်ထိန်းချုပ်မှုကို SPA ဖြင့် ပြသနိုင်သည်။ သို့သော် စာရင်းပိုင်ရှင်မှ ငွေသားထုတ်ယူလိုပါက လက်ရှိငွေလဲလှယ်နှုန်းဖြင့် နိုင်ငံသုံးငွေကြေးကို အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခြင်း။ အဆိုပါကတ်များသည် နိုင်ငံသုံးငွေကြေးတည်ငြိမ်မှုမရှိသော ဝင်ငွေနိမ့်နိုင်ငံများမှ ဘဏ်စာရင်းမရှိသည့် နိုင်ငံသားများ အတွက် အထူးသဖြင့် ပို၍အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သည်။
စက်ရုပ်ဟုတ်မဟုတ် ခွဲခြားခန့်မှန်းခြင်း သို့မဟုတ် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် အလားတူ လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် Satoshi အနည်းငယ်ကို ထုတ်ပေးနိုင်သော Bitcoin ဒင်္ဂါးထုတ်စက်ကဲ့သို့ SPA ဆုချီးမြှင့်ရန် ကြော်ငြာခြင်း။
ငွေလဲလှယ်ခြင်း ကဏ္ဍတွင်သာမက အခြားကဏ္ဍများတွင်ပါ လျှို့ဝှက်ငွေကြေးကို လူသိများလာစေရန်နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း။
“စက္ကူ” ပိုက်ဆံအိတ်များအတွက် ဆော့ဖ်ဝဲ။
လျှို့ဝှက်ငွေကြေးများကြား လုပ်ဆောင်ချက်များ အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း။
လုံလုံခြုံခြုံ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့် ပိုက်ဆံအိတ် ပုံစံတို့အား ပြင်ဆင်မွမ်းမံနိုင်မည့် ထပ်ဆောင်းကွန်ရက်များ
ထိပ်တန်း လျှို့ဝှက်ငွေကြေး 100 ကြား အဆင့်ရောက်ရှိခြင်း။
လျှို့ဝှက်ငွေကြေးနှင့်ဆိုင်သည့် ကြော်ငြာနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ် ဗီဒီယိုများအပါအဝင် အခြားကြော်ငြာအချက်အလက် ပြင်ဆင်ခြင်း။
.onion ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုနှင့် TOR ဘရောက်ဇာအတွက် node တစ်ခု ဖန်တီးခြင်း။
Smart contracts and smart assets. စမတ်စာချုပ်နှင့် စမတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ။
SPA သုံးစနစ်များအတွက် စုပေါင်းရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခြင်း။
ICO platform using SPA. SPA သုံး ICO platform။
သုံးစွဲသူအချင်းချင်း ချေးငှားရန် ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုလွတ်ကင်းသည့် ဘလော့ခ်ချိတ်ဆက်မှု အခြေပြု platform ။